ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဖျော်ရည်တွေရဲ့ အကျိုး ၁၀ ခု – Gentleman Magazine
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဖျော်ရည်တွေမှာ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူး အမြောက်အများ ပါဝင်ပြီး ဂေါ်ဖီ၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ဘရိုကိုလီ၊ ဆလတ်နဲ့ တခြား အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ သင် ကြိုက်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုပါ ထည့်ပြီး ဖျော်စပ်သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ငှက်ပျော၊ ပန်းသီး၊ ထောပါတ်သီး၊ သရက်သီး၊ သစ်တော်သီးတွေကိုပါ ထည့် သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဖျော်ရည် နေ့စဉ်သောက်သုံးခြင်းရဲ့ မြောက်များစွာသော အကျိုးတွေထဲက အချို့ကတော့
၁. ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဖျော်ရည်တွေမှာ အာဟာရဓာတ်ချည်းပဲ သီးသန့် ပါဝင်ပါတယ်။ ထည့်သွင်းသောက်သုံးမယ့် အသီးအရွက်ကို လိုက်ပြီး ဗိုက်တာမင် ပါဝင်မှု ကွဲပြားသွားနိုင်ပေမယ့် ဗိုက်တာမင် အေနဲ့ စီ တို့ကတော့ အမြောက်အများ ပါဝင်မှာ မလွဲပါဘူး။ မာလကာသီးမှာ ဖောလိတ်ဓာတ် ပါဝင်ပြီး ထောပါတ်သီးမှာတော့ ပိုတက်ဆီယမ်နဲ့ မန်းဂနိစ် အမြောက်အများပါဝင်ပါတယ်။
၂. ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဖျော်ရည်တွေဟာ အချိုရည်တွေထက် ပိုပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။ အချိုရည်မှာ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္ထုဓာတ်တွေ ပါဝင်ပေမယ့် အမျှင်ဓာတ် မပါပါဘူး။ ဖျော့ရည်တွေကတော့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် အကုန် အသုံးပြုထားလို့ အမျှင်ဓာတ်တွေပါ ပါဝင်မှာပါ။
၃. ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဖျော်ရည်တွေဟာ သင့်ကို ဟင်းသီးဟင်းရွက် စားဖြစ်စေပါတယ်။ လူတော်တော်များများဟာ ဟင်းသီးဟင်းရွက် သိပ်မစားဖြစ်ပါဘူး။ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဖျော်ရည်မှာ အရွက်တွေရဲ့ အရသာဟာ အသီးအရသာထဲမှာ ဖုံးကွယ်နေလို့ အရွက်တွေပါနေမှန်း သတိတောင် ထားမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၄. ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဖျော်ရည်တွေဟာ လုပ်ရလွယ်ကူပါတယ်။ Blender တစ်ခုရှိရင် ရပါပြီ။
၅. အိမ်လုပ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖျော်ရည်တွေဟာ ငွေကုန်သက်သာပါတယ်။ Bar တစ်ခုမှာ အသီးဖျော်ရည် မှာရင် ၅၀၀၀ လောက် ပေးရပေမယ့် အိမ်မှာလုပ်ရင်တော့ ၅၀၀ တောင် မကုန်ပါဘူး။ အားဆေးတွေ ဈေးကြီးပေးဝယ်သောက်တာထက်တောင် အာဟာရ ပိုပါပါသေးတယ်။
၆. ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဖျော်ရည်တွေဟာ ကလေးတွေကို ဟင်းသီးဟင်းရွက် စကျွေးဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းပါ။ အစပိုင်းမှာ အသီးများများ ထည့်ဖျော်ဖို့ လိုအပ်ပြီး သူတို့ အရသာ ယဉ်သွားတဲ့အခါမှ ပုံမှန် ပြန်ဖျော်ပါ။
၇. ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖျော်ရည်တွေက ရတဲ့ စွမ်းအင်ဟာ တာရှည်ခံပါတယ်။ အသီးဖျော်ရည်တွေကလဲ စွမ်းအင်ပေးပေမယ့် ခဏလေးပဲ ပေးတာပါ။ အသီးတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ သကြားဟာ မြန်မြန်လောင်ကျွမ်းပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကတော့ ဒီလောက်မမြန်ပါဘူး။
၈. ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဖျော်ရည်တွေဟာ ကယ်လိုရီနည်းနည်းနဲ့ ဗိုက်ပြည့်စေပါတယ်။ အမျှင်နဲ့ ရေတွေ အများကြီးပါလို့ တစ်ခွင်သောက်လိုက်တာနဲ့ ထမင်း တစ်နပ်စားရသလို ခံစားရစေပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့လိုသူတွေအတွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဖျော်ရည်တွေဟာ ပေါင်မတက်ပဲ ဗိုက်ဆာပြေစေပါတယ်။
၉. ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖျော်ရည်တွေဟာ အစာချေဖျက်ရ လွယ်ကူပါတယ်။ အစာစားပြီး အစာမကျေမှုကို ခံစားရတဲ့လူတွေဟာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖျော်ရည် သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
၁၀. ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဖျော်ရည်တွေဟာ သင့်ကို ရေဓာတ် ပြည့်တင်းစေပါတယ်။ ရေတစ်နေ့ကို ၈ ခွက်သောက်သူဆိုတာ ခပ်ရှားရှားပါ။ ရေရဲ့ အရသာ မကြိုက်လို့ မသောက်တာ များပါတယ်။ သင်သာ အဲလိုလူထဲ ပါရင် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဖျော်ရည် ဖျော်တဲ့အခါ ရေများများ ထည့်ဖျော်လိုက်ပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်မသိပဲ ရေများများ သောက်ပြီး ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဟငျးသီးဟငျးရှကျ ဖြျောရညျတှရေဲ့ အကြိုး ၁၀ ခု
ဟငျးသီးဟငျးရှကျ ဖြျောရညျတှမှော ကနျြးမာရေး အကြိုးကြေးဇူး အမွောကျအမြား ပါဝငျပွီး ဂျေါဖီ၊ ပနျးဂျေါဖီ၊ ဘရိုကိုလီ၊ ဆလတျနဲ့ တခွား အစိမျးရောငျ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှေ ပါဝငျပါတယျ။ သငျ ကွိုကျတဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေိုပါ ထညျ့ပွီး ဖြျောစပျသောကျသုံးနိုငျပါတယျ။ ငှကျပြော၊ ပနျးသီး၊ ထောပါတျသီး၊ သရကျသီး၊ သဈတျောသီးတှကေိုပါ ထညျ့ သောကျသုံးနိုငျပါတယျ။ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ ဖြျောရညျ နစေ့ဉျသောကျသုံးခွငျးရဲ့ မွောကျမြားစှာသော အကြိုးတှထေဲက အခြို့ကတော့
၁. ဟငျးသီးဟငျးရှကျ ဖြျောရညျတှမှော အာဟာရဓာတျခညျြးပဲ သီးသနျ့ ပါဝငျပါတယျ။ ထညျ့သှငျးသောကျသုံးမယျ့ အသီးအရှကျကို လိုကျပွီး ဗိုကျတာမငျ ပါဝငျမှု ကှဲပွားသှားနိုငျပမေယျ့ ဗိုကျတာမငျ အနေဲ့ စီ တို့ကတော့ အမွောကျအမြား ပါဝငျမှာ မလှဲပါဘူး။ မာလကာသီးမှာ ဖောလိတျဓာတျ ပါဝငျပွီး ထောပါတျသီးမှာတော့ ပိုတကျဆီယမျနဲ့ မနျးဂနိဈ အမွောကျအမြားပါဝငျပါတယျ။
၂. ဟငျးသီးဟငျးရှကျ ဖြျောရညျတှဟော အခြိုရညျတှထေကျ ပိုပွီး ကနျြးမာရေးနဲ့ ကိုကျညီပါတယျ။ အခြိုရညျမှာ ဗီတာမငျနဲ့ သတ်ထုဓာတျတှေ ပါဝငျပမေယျ့ အမြှငျဓာတျ မပါပါဘူး။ ဖြော့ရညျတှကေတော့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ အကုနျ အသုံးပွုထားလို့ အမြှငျဓာတျတှပေါ ပါဝငျမှာပါ။
၃. ဟငျးသီးဟငျးရှကျ ဖြျောရညျတှဟော သငျ့ကို ဟငျးသီးဟငျးရှကျ စားဖွဈစပေါတယျ။ လူတျောတျောမြားမြားဟာ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ သိပျမစားဖွဈပါဘူး။ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ ဖြျောရညျမှာ အရှကျတှရေဲ့ အရသာဟာ အသီးအရသာထဲမှာ ဖုံးကှယျနလေို့ အရှကျတှပေါနမှေနျး သတိတောငျ ထားမိမှာ မဟုတျပါဘူး။
၄. ဟငျးသီးဟငျးရှကျ ဖြျောရညျတှဟော လုပျရလှယျကူပါတယျ။ Blender တဈခုရှိရငျ ရပါပွီ။
၅. အိမျလုပျ ဟငျးသီးဟငျးရှကျဖြျောရညျတှဟော ငှကေုနျသကျသာပါတယျ။ Bar တဈခုမှာ အသီးဖြျောရညျ မှာရငျ ၅၀၀၀ လောကျ ပေးရပမေယျ့ အိမျမှာလုပျရငျတော့ ၅၀၀ တောငျ မကုနျပါဘူး။ အားဆေးတှေ ဈေးကွီးပေးဝယျသောကျတာထကျတောငျ အာဟာရ ပိုပါပါသေးတယျ။
၆. ဟငျးသီးဟငျးရှကျ ဖြျောရညျတှဟော ကလေးတှကေို ဟငျးသီးဟငျးရှကျ စကြှေးဖို့ အကောငျးဆုံး နညျးလမျးပါ။ အစပိုငျးမှာ အသီးမြားမြား ထညျ့ဖြျောဖို့ လိုအပျပွီး သူတို့ အရသာ ယဉျသှားတဲ့အခါမှ ပုံမှနျ ပွနျဖြျောပါ။
၇. ဟငျးသီးဟငျးရှကျဖြျောရညျတှကေ ရတဲ့ စှမျးအငျဟာ တာရှညျခံပါတယျ။ အသီးဖြျောရညျတှကေလဲ စှမျးအငျပေးပမေယျ့ ခဏလေးပဲ ပေးတာပါ။ အသီးတှမှော ပါဝငျတဲ့ သကွားဟာ မွနျမွနျလောငျကြှမျးပါတယျ။ ဟငျးသီးဟငျးရှကျကတော့ ဒီလောကျမမွနျပါဘူး။
၈. ဟငျးသီးဟငျးရှကျ ဖြျောရညျတှဟော ကယျလိုရီနညျးနညျးနဲ့ ဗိုကျပွညျ့စပေါတယျ။ အမြှငျနဲ့ ရတှေေ အမြားကွီးပါလို့ တဈခှငျသောကျလိုကျတာနဲ့ ထမငျး တဈနပျစားရသလို ခံစားရစပေါတယျ။ ကိုယျအလေးခြိနျလြော့လိုသူတှအေတှကျ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ ဖြျောရညျတှဟော ပေါငျမတကျပဲ ဗိုကျဆာပွစေပေါတယျ။
၉. ဟငျးသီးဟငျးရှကျဖြျောရညျတှဟော အစာခဖြေကျြရ လှယျကူပါတယျ။ အစာစားပွီး အစာမကမြှေုကို ခံစားရတဲ့လူတှဟော ဟငျးသီးဟငျးရှကျဖြျောရညျ သောကျသုံးသငျ့ပါတယျ။
၁၀. ဟငျးသီးဟငျးရှကျ ဖြျောရညျတှဟော သငျ့ကို ရဓောတျ ပွညျ့တငျးစပေါတယျ။ ရတေဈနကေို့ ၈ ခှကျသောကျသူဆိုတာ ခပျရှားရှားပါ။ ရရေဲ့ အရသာ မကွိုကျလို့ မသောကျတာ မြားပါတယျ။ သငျသာ အဲလိုလူထဲ ပါရငျ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ ဖြျောရညျ ဖြျောတဲ့အခါ ရမြေားမြား ထညျ့ဖြျောလိုကျပါ။ သငျကိုယျတိုငျမသိပဲ ရမြေားမြား သောကျပွီး ဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။
Previous: လှပတဲ့ မနက်ဖြန်တွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်း(၅)သွယ်
Next: ဘီလျံနာတစ်ယောက်လို တွေးခေါ်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းများ